प्रशासनको अत्यधिक बल प्रयोगपछि डा. केसी काठमाडौंका लागि उडें - Everest Dainik - News from Nepal
प्रशासनको अत्यधिक बल प्रयोगपछि डा. केसी काठमाडौंका लागि उडें
काठमाडौं, साउन ३ । २० दिनदेखि जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा सेवा विधेयक पूर्वसहमति अनुसार संसदमा पेश गर्न मार्ग गर्दै आमरण अनशनरत प्राडा गोविन्द केसी विद्यार्थी र समर्थकमाथि बिहीबार स्थानीय प्रशासनले अत्यधिक बल प्रयोग गरेपछि काठमाडौं आउन सहमत भएको छन् ।
डा केसी सरकारले पठाएको नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा काठमाडौंका लागि केही समय अगाडि उडेंका छन् । उनलाई जुम्लावासीले माला लगाएर विदाई गरेका छन्। अनशनको बीसौं दिन सरकारले जुम्लामा बल प्रयोग गरेर डा केसीलाई उठाउन खोजेपछि प्रतिरोधका बाबजुद उनी काठमाडौ आउन सहमत भएका हुन्।
जुम्लामा कर्फ्यु घोषणा गरेर सरकारले सर्वसाधारण र केसीका समर्थकहरुलाई निष्क्रिय पार्न खोजेपछि डा. केसी अत्यन्तै दुखी भएका छन् । गुन्डागर्दी, अस्पताल तोडफोड नगर्न बरु आफु काठमाडौं जान्छु भनेका थिए ।
‘यसरी गुन्डागर्दी गर्नुपर्दैन, अस्पताल तोडफोड गर्नुपर्दैन। यस्तो नरसंहार देख्नुभन्दा बरु म काठमाडौं जान्छु’, डा केसीलाई उद्धृत गर्दै उनका सहयोगी डा विशाल दाहालले भने।
याे पनि पढ्नुस ज्योतिलाई मेयर कान्तिकाले दिइन गुन्यूचोलो
स्थानीय, विद्यार्थी र चिकित्सकले प्रतिरोध गर्न खोज्दा प्रहरीले लाठी चार्ज गरेको थियो । अश्रु ग्याँसहित प्रहरी गोली चल्दा दर्जनौं घाइते भएका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तनावग्रस्त बनेको थियो । प्रहरीको गोली लागेर एक जना प्रहरी घाइते भएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस सरकारलाई डा. केसीकाे तीन दिने अल्टिमेटम